War-Murtiyeed: Banbax-hawleedka Saddex-Geesoodka ah ee Hay’adaha Dastuurka oo soo xirmay - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > War-Murtiyeed: Banbax-hawleedka Saddex-Geesoodka ah ee Hay’adaha Dastuurka oo soo xirmay
September 17, 2019 admin271
Kulan wadajir ah oo ay isugu yimaadeen saddexda Hay’adood ee u xilsaaran Arrimaha Dib-u- eegista Dastuurka oo kala ah Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga la Socodka Dib -u- Eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ee BFS iyo Guddiga Madaxabannaan ee dib -u-Eegista iyo Hirgelinta Dastuurka 15 – 17 Sebtember 2019, ayaa lagu qiimayay howlihii la soo qabtay iyo caqabadihii lala kulmay sanadka 2019. Kulankaas ayaa hay’adaha u xil-saaran dib u eegista Dastuurka waxay si qoto-dheer u falanqeeyeen dibna u eegeen tubta geedi socodka dib -u eegista Dastuurka iyo qorshayaasha kale ee la jaanqaadayey, ayagoo isla qaatey qodobada soo socda:
Hay’adaha ka shaqeeya dib u eegista dastuurka ee heer Federaal waxa ay bogaadiyeen guusha laga gaaray dib u eegista dastuurka gaar ahaan dib u eegista dhanka farsamada ee lagu sameeyay 15ka cutub ee Dastuurka KMG balse waxaa ay isla qireen inay weli harsan yihiin qaybo ka mid ah arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u Ayadoo laga anbaqaadayo qorshahii hay’adaha dastuurka ee wakhti dhamaadkiisu ahaa December 2019 ayaa haddaba waxaa ay isla meel dhigeen hay’adaha in loo baahan yahay wakhti dheeraad ah oo lagu dhamaystiro howlaha harsan dib u eegista dastuurka kaas oo ay isku afgarteen in howlaha dhiman lagu soo afjaro ugu danbeyn Juun 2020 ka horna loo gudbiyo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya .
Hay’adaha Dastuurka waxaa ay ugu baaqayaan Madaxda sare ee Dawladda Federaal iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka inay sida ugu dhakhsiyaha badan heshiis wax ku ool ah uga soo gaaraan arrimaha wada-xaajoodka siyaasadeed u baahan ee ku jira Dastuurka ayadoo hay’adaha Dastuurka ee heer Federaal iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah ay la diyaar yihiin inay ka caawiyaan dhinaca farsamada.
Waxaa la go’aamiyay in sadexda hay’adood ayagoo kaashanaya hay’adaha dastuurka ee dawladaha xubnaha ka ah federaalka bilaabaan latashiyada dadwaynaha ee dib-u-eegista dastuurka.
Hay’aduhu waxaa ay mar kale adkeynayaan in sida ugu dhakhsaha badan lagu soo dhameystiro xubnihii ku matali lahaa Dowlad Goboleedyada Guddiga Madaxa-banaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgalinta Dastuurka.
Hay’adaha Dastuurka waxaa ay u mahadcelinayaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha Caalamka ee teegaara Geedi-socodka dib u eegista Dastuurka gaar ahaan UNDP iyo Max Planck iyadoo lagu boorinayo inay sii dar-dar geliyaan taageeradooda si howsha dhiman loogu dhameystiro waqtiga dhiman.
Donald trump oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay Safiirka cusub ee soomaaliya
Ciidanka Asluubta oo u dabaaldegaya sanadguurada 49-aad